UNgcobo noMashiane sebefisa ukuzwa ubumnandi bokuwina indebe kwiChiefs - Impempe
UNgcobo noMashiane sebefisa ukuzwa ubumnandi bokuwina indebe kwiChiefs
UHappy "Vavo" Mashiane weKaizer Chiefs unezinkumbulo ngeNedbank Cup
Njengoba esezibekiselile indawo eqenjini eliqala imidlalo kwiKaizer Chiefs uNkosingiphile “Mshini” Ngcobo, manje usefuna ukuzwa ubumnandi obuhambisana nokuwina indebe kuleli qembu laseNaturena.
Kuyinto eyaziwayo ukuthi kucishe kuzamazame iNingizimu Afrika yonke uma Amakhosi edlala emdlalweni wamanqamu, okwenzeka uma eyinqobile leyo ndebe okwangelinye ilanga.
Leli qembu linabalandeli abaningi cishe ukuwedlula wonke kuleli futhi bayaziwa ngokungazenyezi kwabo uma kumele bachome uma Amakhosi enze into enhle.
Yiwo lo muzwa awufisayo manje uNgcobo oselokhu afika kuMakhosi engena enkulisa yawo ngo-2015 akakaze awuzwe kwazise izindebe azisaziwa nhlobo eNaturena.
“Thina njengabadlali abasebancane siyafisa ukuzwa lowo muzwa wokuwina indebe kwiChiefs,” kusho uNgcobo. Amakhosi aqala umkhankaso wawo kwiNedbank Cup ngeSonto. Bazogadulisana beqembu lakwiGladAfrica Championship, iRichards Bay FC eFNB Stadium ngo 5 ntambama.
“Sengikubheke ngabomvu ukudlala kwiNedbank Cup,” kusho uNgcobo oneminyaka engu-21, nozalwa eMgungundlovu.
Uzakwabo eqenjini, uHappy “Vavo” Mashiane naye unesifiso esifanayo nesikaNgcobo futhi yena unezinkumbulo ezinhle nezimbi ngale ndebe ekhokha uR7-million eqenjini eliyiwinayo.
Ezinhle wukuthi uMashiane wadlala umdlalo wakhe wokuqala eqenjini elikhulu kwiChiefs kuwo lo mqhudelwano ngo-2019. Ezimbi wukuthi ngawo lowo nyaka, Amakhosi ahlazeka kabuhlungu kubuka izwe eshaywa yiTS Galaxy kowamanqamu.
“Kungenzeka ukuthi abantu abazi ukuthi ngadlala umdlalo wami wokuqala kwiNedbank Cup ngoJanuwari 27, 2019 sibhekene neTornado FC eMonti. Yilapho engathola khona ithuba lokuqala lokudlala eqenjini elikhulu.
“Ngaphazanyiswa wukulimala ke kodwa sahamba saze safika kowamanqamu ngo-2019. Sekuyisikhathi manje sokuthi sidlale ngokuzikhandla ukuze sifeze isifiso sethu sokuwina iNedbank Cup,” kuchaza uMashiane oneminyaka engu-23, ozalwa eTembisa, eGauteng.
Previous Previous post: Ngabe useqala ukucikeka wukubhacaza kwePirates uZinnbauer?
Next Next post: UKaruru uhlephule izinhliziyo zabalandeli beZenkosi